Ukukhuphuka kwe-Indigolet kwavuka: ukutshala nokunakekelwa
Ukuzibandakanya, Ukuhlelwa kwemvelo
Abalimi abaningi basebenzisa ukutshala kwe-roses ekhuphukayo ukuhlobisa iziqhumane zezindlu zabo, ama-arbors, izicingo kanye nama-arches. Ukunyuka kwama-Indigoletta akuyona into ehlukile. Ukuze kubonakale kubalulekile ukubonga abalimi abavela eNetherlands, baye bakhula le mbala engavamile ngokuvuna nokuvuna okukhulu.
Ukukhetha indawo yokutshala i rose rose
I-indigoletta eshicilelwe yisitshalo esingenakuzithoba, ukumelana nezifo, okuzizwa kahle kokubili eceleni kwelanga legceke nase-penumbra. Nakuba kukholelwa ukuthi ukugibela ama-roses kuthanda ilanga, yilokho okuhlukahluka okunesimo sengqondo esihlukile emisebeni yaso. Ukukhuphuka kwe-Rose Indigoletta, ukubuyekezwa kwabaflorisi ukuthi yikuphi okuthakazelisayo kunayo yonke, ezindaweni ezingaphansi kwelanga zokutshala kunika umbala we-purple violet ngaphezulu. Ngaphezu kwalokho, e-penumbra, akuyona into efuna ukunakekelwa njengelanga.
Ukukhethwa kwendawo kungcono ukuqala ngokunquma ukuthi indima ye-climbing i-Indigoletta izoba yini engadini. Uma inhloso yakhe ukudala umcibisholo othumayo, khona-ke ohlangothini lungaboniswa, into esemqoka ukuthi i-roses akufanele ikhule kule ndawo ngaphambili. Lokhu kuqapha kuyadingeka ukuvikela izithombo ezifweni ezinokwenzeka noma izinambuzane ezingase zihlale emhlabathini ezitshalweni zangaphambilini.
Ukukhetha umhlaba ngenxa yeRogo Indigoletta
Inhlabathi engcono kakhulu yale mbali yindawo evulekile, engaphansi komhlaba etholakala ebusweni engaphansi kwamamitha ama-1.5-2 ejulile. Uma i-Indigoletta yokukhuphuka i-rose itshalwe eduze kwendlu noma i-pergola, khona-ke izimbobo kufanele zicutswe imitha ukusuka odongeni ukuze amanzi emvula noma ama-meltwater angahlangani emhlathini.
Ngaphambi kokutshala, lungisa imithombo. U-Rose Indigoletta, imibono mayelana nokuthi iyiphi imvelo enhle eshiya abalimi, njengokuthi umgodi wawungenani okungama-50 cm ejulile, ngaphambi kokukhulelwa ngomquba noma ingxube yenhlabathi ne-humus nesihlabathi somfula.
Abalimi abanokuhlangenwe nakho batusa ngokushesha ngaphambi kokutshala izimpande zesitshalo enhlanganisela elungiselelwe ye-mullein ngobumba namanzi, okuzosiza ukuba ahlale ngokushesha endaweni entsha.
Ukutshala i-rose climbing
Ukukhuphuka kwama-Indigolet kufanele kukhishwe kahle ngaphambi kokutshala. Kunconywa ukushiya izinso ezingu-6-7 ekuphakameni kwezingu-30 cm, kanti ngesikhathi sokutshala kuyadingeka ukuba ufafaze izimpande zomhlaba kancane kancane, ungqimba ngalunye lunqamuke kancane.
Ukwesekwa kufanele okungenani kube ngu-20 cm kusukela empandeni yenzalo. Ngemuva kokuthi lesi sitshalo sifafazwe futhi siphume kancane, kufanele sithande kancane ekusekelweni futhi siphuze. Ukunakekelwa okuqhubekayo kuqukethe ukuchelela nokuphakama.
Ukunakekela i-Rose Indigoletta
Ngokungafani nezinye izinhlobo zokukhuphuka, i-rose ye-Indigoletta, isithombe esibonisa, inikeza izimbali ezinhle ezimnandi uma zitshalwe kule penumbra. Ilanga elikhanyayo nokushisa kunemibono ephikisanayo, njengoba izimpondo zezimbali ziyashisa ngokushesha bese ziwa. Uma kungekho nenye indawo ngaphandle kwegceke elikhanyayo legceke lokutshala, khona-ke isitshalo kufanele sifafazwe ngamanzi ekuseni nakusihlwa.
Isikhathi sokuqala emva kokutshala izihlahla zifuna ukuchelela okuningi, kodwa hhayi kaningi ngaphezu kwesonto ngesonto. Ngaphandle kwalokho kungenzeka i-roses ithululelwe, ngoba lokhu kuzobangela ukubola kwesistimu.
Njengoba le mbali ikhula ibe ngamamitha amathathu ukuphakama futhi iqukethe amaqabunga amakhulu, eqoqwe ngebhayisikili yezingcezu ezingu-3, kufanele inikezwe ngezesekelo ezengeziwe njengoba amagatsha ekhula. Ukunyuka kwe-rose Indigoletta (ukubuyekezwa kwabalimi kuqinisekisa lokhu) kwaqhakaza isikhathi eside ngangokunokwenzeka, kubalulekile ukuqeda izimbali ezomile.
Ukunciphisa i-indigolet yama-rose
Lesi sitshalo asidingi izihlahla ezikhethekile, kodwa njengoba izimbali ziqhakaza, kubalulekile ukusika lezi zihlumela ngokuphelele ukuze zivele zivela. Uma omusha obuthakathaka, kungcono ukushiya omdala kuze kufike isihlahla.
Emadlelweni amaRose Indigoletta ngokwanele ukushiya amahlumela ama-5-6, ngakho ngonyaka ozayo izimbali zaziziningi.
I-Rose Indigolet stalks - isitshalo esingenakuzithoba, kodwa noma kunjalo sidinga umzamo ovela kubaflorisi.
Okokuqala, kuyathandeka ekugqokeni okuphezulu. Indlela engcono kakhulu yokufaka umanyolo i-mullein ehlanjululwe. Ungase futhi uthenge umanyolo wamaminerali okwenziwe ngomumo wokukhwela ama-roses.
Umhlabathi ozungeze izimpande kufanele uvulwe ngokukhululekile ukuze kungabikho ukulimala. Kungcono nakakhulu ukuguqula umhlabathi. Ngenxa yalokhu, uma ukhulula, kwanele ukwengeza u-sawdust noma utshani, oluzovikela uhlelo lwempande ekukhenizeni nokukoma.
Ukuvikelwa kwe-Indigoletta ephakama yama-frosts
Lolu hlobo lwezithelo lubekezelela ukushisa okuhle, kodwa kungcono ukuqapha kunokulahlekelwa yisihlahla esihle enempilo.
Ngemuva kokuqhakaza, isitshalo kufanele sikhululwe ezimbali eziphelile futhi ezingenasici, futhi lapho izinga lokushisa emgwaqweni liwela phansi kuya ku--5 degrees, lingaboshwa futhi lifihliwe.
Ukuze uthole indawo yokuhlala, susa amagatsha ngokucophelela kusukela ekusekeleni bese uwabeka emaqabunga aphelile, i-lapnik noma utshani. Ngaphandle kwalokho kufanele ubeke amagatsha emhlabathini ongavikelekile. Bese uphakamisa ama-roses epulasitiki, kodwa ukuthi phakathi kwalo nesitshalo kwakuyizingqimba zomoya.
Entwasahlobo akunakwenzeka ukugcina ama-roses efilimu isikhathi eside. Lapho nje sekufudumala, vula izihlahla bese uzibopha ezisekelweni.
Ukukhiqizwa kwe-Indigolet ukukhuphuka kwenyuka
Lezi zinhlobo ze-roses zanda nge-cuttings noma izendlalelo. Ukuze uthole i-batch yekhwalithi, entwasahlobo ukhethe i-shot enempilo, eqinile, uyibophe phansi, uyibeke bese uyifafaza ngomhlaba. Kuzo zonke ihlobo, lalela le ndawo ngokucophelela. Ngonyaka ozayo uzodinga ukusika isitshalo esikhulile kusuka egatsheni lomama nokufakelwa.
Ukusika izakhi kufanele kuthathe amahlumela aphakathi kwesihlahla. Kufanele babe nezinso ezine noma ngaphezulu. Ungakwazi ukusika amahlumela kuphela emva kokuba lesi sitshalo siphelile. Ihlala isetshenziselwa ukuwafaka emhlabathini, ukukhulula, amanzi futhi ulinde izimbali eziningi.
URosa Indigoletta uye wanqoba izinhliziyo zabalimi emhlabeni jikelele. Iphunga layo liqhathaniswa nephunga le- damask rose nge-saturation yayo, ngenkathi ibona khona kwamanothi ahlanjululwe ngaphezulu. Lesi sitshalo singanikeza ubuhle obuhle bensimu.
Izindlu eziyisikhombisa eziqinile kakhulu
Ukuzala - kuyini? Iyini ukuzala kwenhlabathi?
Isikhombi cherry obomvu? izakhiwo ezisebenzisekayo zokupheka Iziphungo
I-Electrorubanok "i-Interskol". Konke okudingeka ukwazi ngaleli thuluzi
Umkhosi wokushisa: buka ikusasa, ukhanyise!